Raw Amp Citrate (71776-70-0) mpamatsy HPLC≥98% | AASraw
/ Products / Prohormone / Ampitrandraka Citrate (71776-70-0)
SKU: 71776-70-0. Sokajy: Prohormone
Ny AASraw dia miaraka amin'ny fahaiza-mampiasa sy ny famokarana maimaim-poana avy amin'ny gram ka hatramin'ny filahatry Amp Amp Citrate (71776-70-0), eo ambany fifehezan'ny CGMP sy ny rafitra fanaraha-maso kalitao.
Araka ny voalaza etsy ambony AMP citrate dia tena mifanakaiky amin'ny DMAA na 1,3-dimethylamylamine. Ny fifandraisana akaiky eo amin'ireo fitaovam-pirahalahiana roa ireo dia mety ho tsara indrindra amin'ny hoe ny AMP citrate (methylpetanamine) sy ny DMAA (AKA methylhexanamine) dia mitovy ny fototra fototra, fa ny DMAA dia misy karba fanampiny ao amin'ny skelèt ...
Ampitao video mihetsika
Ampitomboy ireo karazan-tsoratra fototra
Formula Molecular: C6H15N â € ¢ HCl
Meny fitetezana 137.7
Famaritana anarana: Amp Citrate
Nandritra ny taona vitsy lasa, ny Citrate AMP dia nanjary fitaovana malaza ao amin'ny fanafarana alim-bolana sy ny fikarakarana fidiovana. Avy amin'ny fomba fijerin'ny siansa, dia fantatra amin'ny hoe methylpentanamine, citrate 4-amino-2-methylpentane na 1,3-dimethylbutylamine (DMBA), saingy matetika antsoina hoe "DMAA" vaovao izy io. Izany dia hita avy amin'ny fitoviana goavana - fandrarana sy fandrosoana, amin'ny lafiny rafitra sy vokatra simika.
AMP Citrate dia faniriana matanjaka ho an'ny rafi-pitabatabana. Tsy mitrona be ao anaty dosie goavana, fa azo hita ao anaty kely ao amin'ny Tea Pouchong, saingy heverina fa ny ankamaroan'ny Citrate AMP ampiasaina amin'ny fanampim-panafody dia notsongaina tamin'ny fomba ofisialy.
Noho ny fitoviany amin'ny DMAA ny fampiasana azy sy ny tombony amin'ny fanampiana dia mitovy ihany koa. AMP Citrate manimba ny rafi-pitabatabana ao an-trano toy ny kafeinina saingy mahery vaika tokoa izany. Raha mampiasa io alohan'ny fampiofanana dia ho hitanao:
- Fampitomboana ny angovo (indrindra rehefa miaraka amin'ny kafeinina)
- Mifantoka amin'ny saina
- Fomba fakana an-keriny
- Mampitombo ny asan'ny atletika
Raha oharina amin'ny kafeine avo dia avo ny AMP Citrate amin'ny ankapobeny miaraka amin'ny famotsorana ny angovo mahery vaika kokoa noho ny fianjeran'ny lozam-pifamoivoizana.
AMP Citrate supplementes dia nahafinaritra ny fihazakazaka ny sasany tamin'ireo fivarotana be mpividy indrindra eny an-tsena.
Ny sora-baventy miampy ny AMP Citrate:
-BPM Labs Ny iray 2.0
BPM Labs no mandratra
-Torohevitra tsy azo sakanana
Inona no atao hoe dos Citrate
MAHASOA ANAO ANDRIAMANITRA IZAY IZAY AZO AMPIASAINA ITY
TSY AZO AMPIASAINA HO ANTSIKA HO ANTSIKA HO AN'NY FANOHANANA NY FITSIPIKA SY NY FITONDRANA MIKASIKA
Noho ny tsy fisian'ny fitsapana momba ny fitsaboana amin'ny AMP, sarotra ny mamaritra ny dosie nomeny. Na izany aza, dia andrasana fa ny doka dia ambony noho ny DMAA izay manondro azy amin'ny 100 amin'ny 350 mg. Ny fotoana mahomby dia ny ora 4-6.
Tena mahomby izy io mba hampitomboana ny angovo mandritra ny fampiofanana. Tsara ny maka ampahany amin'ny 30 minitra alohan'ny fampiofanana. Mba hampitomboana ny metabolismao sy ny fahaverezanao matavy, tokony alaina amina maraina na alohan'ny sakafo.
AMP dia miara-miasa amin'ny kafeinina, ary noho izany dia afaka mahita matetika ireo akora ao anatin'ilay fanafody efa mialoha ny fanatontosana ianao. Raha ny fampiasana azy io "sololo" dia tokony ampiana 200-300 mg kafin'ny kafeinina mba hanamafisana ny tombontsoa.
Manomboka amin'ny dosage ambany mba hanombanana ny fandeferanao, ary hampitombo ny famoahana avy any.
Ahoana no ataon'i Citrate Amp
Ny Citrate AMP dia miasa, amin'ny teoria, amin'ny dika mitovy amin'ny DMAA, nefa tsy toy ny potika. Izany dia mahatonga azy ho fitsaboana ho an'ny neurologique, satria miasa amin'ny famotsorana ny neurotransmitter norepinephrine mahery, ankoatra ny dopamine. Ny fitombon'ny haitao roa dia mety hampitombo ny fiheverantsika, ny fifantohana, ny hery, ny antony manosika ary ny fahamalinana ara-tsaina.
Ny AMP Citrate legal?
Hatramin'izao, eny. AMP Citrate tsy entana tsy ara-dalàna. Na izany aza, dia nodinihan'ny FDA izy ireo taorian'ny fitarainana marobe momba ny fihoaram-pefy nataon'izy ireo. Noho izany, raha ny lalàna AMP Citrate dia ara-dalàna amin'ny fisotroan-dronono, maro ireo orinasa no nanala azy avy eo amin'ny talantalana mba hahazoana antoka fa tsy ho lasibatry ny FDA amin'ny ho avy izy ireo.
AMP Citrate dia mbola misy, fa ny FDA dia toa mihidy haingana be. Azo alaina eo ambanin'ny anarana rehetra voatonona etsy ambony, ary mety bebe kokoa, noho izany dia tokony ho fotoana fohy talohan'ny nandaozanao ny safidinao rehetra. Fa aoka ho fantatrao fa ireo orinasa mampiasa ny fanovana anarana mba hahazoana ny fitsipika FDA dia tsy ny orinasa azo itokisana indrindra.
Ampitomboy ny Marketing Citrate
Misy fiantraikany amin'ny fihenan-javatra ny Citrate Amp Ampitao
Noho ny fitoviany amin'ny DMAA, ny fiantraikan'ny AMP citrate dia mitovy ihany koa. Ny dosie avo dia mety miteraka fahakiviana, fitsaboana haingana, ary soritr'aretina mifandraika amin'izany. Ireo mpifaninana AMP citrate dia nitatitra ihany koa fa mety hiteraka fahasimbana tahaka ny DMAA taorian'ny nanesorana ny vokatra.
Satria AMP citrate dia singa vaovao, nisy ny fianarana vitsivitsy momba ny fitambarana mifandraika amin'ny fahombiazana sy ny fiarovana. Amin'izany, dia manoro hevitra ny mpampiasa rehetra AMP citrate mba hampihatra fampitandremana, tsy handany mihoatra noho ny dosage nomeny, ary tsy ampiasaina miaraka amin'ny alikaola, na vokatra samihafa na sakafo izay misy fitsaboana. Raha toa ianao ka eo amin'ny fanafody na mijaly noho ny toe-pahasalamanao dia omena anao ny tsy hampiasana vokatra izay ahitana ity zavatra ity.
Ahoana no hividianana Amp Citrate avy any AASraw
Ampitomboy Citrate Recipes